Raveloaritiana Mamisoa · Jona 2017 · Global Voices teny Malagasy
Raveloaritiana Mamisoa · Jona, 2017
Nanomboka nandika tamin'ny 22 Febroary 2011 · 2831 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Jona, 2017
Mpifankatia ao anaty fiara mijanona ao amin'ny garazy. Mandeha ny fitaovana mpamaritra rivotra. Maty ny iray tamin'ireo mpifankatia. Tantara nomanin'ilay bilaogera Bahrainita Dr Haitham Salman ho antsika
Ejipta20 Jona 2017
Amerika Latina19 Jona 2017
Azia Afovoany sy Kaokazy19 Jona 2017
Misy tantara mahaliana momba ilay vehivavy Amerikàna nitety an'i Tajikistan ary nanoratra mombamomba ny dia. Tsy afa-po tamin'ny tolotra izy fa tia miresaka amin'ny olona kosa ary mahafantatra momba ny fiainan'izy ireo sy ny fomba amam-panaon'izy ireo. Tao anatin'ny roa andro, manana zavatra marobe hotantaraina izy ...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana17 Jona 2017
Azia Atsinanana17 Jona 2017
Tsy tahaka ny filazana teo aloha teto, sahirana tsy tahaka ny tamin'ny Nüwa ireo bilaogera tamin'ny fitateram-baovaon'izy ireo momba ny tondra-drano nahafatesana olona izay nandrava faritra maro tao Shina nandritra ny vanim-potoanan'ny orana tamin'ity fahavaratra ity .